Zviratidzo nezve India | Absolut Kufamba
Zviratidzo nezve India
Munzanga yanhasi, pfungwa yekufungidzira iri kuwedzera kukosha. Isu tinorarama takakomberedzwa navo, vanodzokororwa kana kushoropodzwa nekuda kwekubatana kwavo nekusarura. Icho chimwe chezvinhu zvinokakavadzana izvo zviri zvachose kuongororwa.
Kufamba ndiwo mushonga wakanakisa kurwisa kufungidzira uye kufungira zvisizvo. Ino vhura pfungwa dzedu munzira churu uye inoita kuti isu tikure kuti tinzwisise nyika uye, kazhinji, zvinhu zvakawanda muhupenyu.
Nyika dzese dzine stereotypes. Semuenzaniso kuti kuEngland chikafu chakanyanya kushata, kuti kuFrance vanozvikudza kwazvo kana kuti kuSpain munhu wese anoziva kutamba flamenco. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika munyika dziri kure seIndia. Asi, Ndeapi mafungiro akajairika nezve India?
1 Chii chinonzi stereotype?
2 Ndeapi mafungiro pamusoro peIndia?
2.1 Nguva dzose tora matanho nezvekudya kweIndia
2.2 MaIndia inyoka
2.3 MaIndia varombo, asi vanofara
2.4 India ine mhirizhonga uye haina hanya
2.5 MaIndia vanotaura Hindi
2.6 Vakadzi vese veIndia vanopfeka saris
2.7 MaIndia ese anoita yoga uye anoti Namaste
2.8 Mhou dzinofamba mumigwagwa
Chii chinonzi stereotype?
Sekureva kweRAE (Royal Spanish Academy), stereotype "mufananidzo kana pfungwa inowanzo gamuchirwa neboka kana nzanga ine hunhu husingachinjiki." Ndokunge, maonero akajairika ezvinogona kutenda mumwe munhu nezveboka revanhu vane hunhu, hunhu kana hunhu. Aya mafungidziro akavakwa munharaunda uye anopa pfungwa yehunhu kana tsika dzenzvimbo.
Ndeapi mafungiro pamusoro peIndia?
Nguva dzose tora matanho nezvekudya kweIndia
Chikafu cheIndia chinonaka! Zvisinei, iwe unogona kunge wakanzwa pane dzakawanda nguva, izvo Paunofamba kuenda kunyika unofanirwa kuchenjerera nekuti unogona kunzwa zvakashata kana ukadya mumatanga emigwagwa. Muchokwadi, ichi chinhu chinogona kuitika chero kupi tikatenga chikafu munzvimbo dzine hutsanana husina chokwadi kana tikanwa mvura isina mabhodhoro.
Uine mamwe mashoma madhairekitori, unogona kunakirwa chikafu cheIndia usingatambure gastroenteritis inozivikanwa yemufambi kana kutambura nezvishoma zvegumi zvefivha. Hapana chikonzero chekutarisa!
Kune rumwe rutivi pane stereotype yekuti zvese zvekuIndia chikafu zvinonaka. Vanhu vazhinji havadi kana kuzeza kuyedza chikafu cheIndia nekuti ivo vanodavira kuti madhishi ese akanakisa uye anozovapa kurwadziwa nemudumbu sezvo vasina kujaira, asi hapana chiri kumberi pachokwadi.
Ichi chiitiko nekuti hachisi chikafu chemuIndia chinonaka. Muchokwadi, kune madhishi asina kufanana naDal Makhani, muto weleya wakasanganiswa necoriander nyowani. Kana iyo korma muto, mhando yecryry curry yakagadzirwa kubva kumate uye kirimu. Hatigone kukanganwa raita muto zvakare, yakagadzirwa necucumber uye yogati inozorodza chero dhishi.
Vanhu vazhinji vanotenda kuti maIndia inyoka. Zvisinei, chokwadi ndechekuti tsika yenyoka dzinokwezva haisi pamutemo mune dzimwe nzvimbo nekudaro inorambidzwa muIndia, kunyangwe vamwe vafambi venyoka vachiripo nanhasi.
MaIndia varombo, asi vanofara
Pakaburitswa bhaisikopo Slumdog Millionaire, hurombo hwakaonekwa mumabhuru umo chiitiko ichi chakaitika chakakanganisa zvikuru nzira iyo India yaionekwa kune dzimwe nyika. Vafambi vazhinji vanoshamisika kuona hurombo mamiriro ayo vanhu vazhinji vanogara muIndia, kutarisana nematambudziko ezuva nezuva nekunyemwerera. Asi zvinopesana nekutenda kwakakurumbira, kwete nyika yese iri murombo.
Vamwe vevanhu vakapfuma pasi pano vanogara muIndia uye munguva dzichangopfuura boka repakati repakati riri kusimukira nekuda kwekuvandudzwa kwedzidzo uye basa. Vanhu vazhinji vari kupukunyuka hurombo uye kusvika pahupenyu huri nani.
India ine mhirizhonga uye haina hanya
Kunyangwe paine nzvimbo dzinogona kuve dzakashongedzerwa zvakanyanya uye dzimwe nguva traffic ine mhirizhonga, muIndia senyika dzese kunewo nzvimbo dzine mapaki, mahotera emhando yepamusoro uye nzvimbo dzekutengesa, maresitorendi akanaka nemabhawa ehusiku zvakawandisa. .
MaIndia vanotaura Hindi
Iyi stereotype yakapararira kunze kwenyika. Vanhu vazhinji vanotenda zvisirizvo kuti izwi rekuti "Hindu" rinoreva zvese chitendero uye mutauro wepamutemo weIndia. Nekudaro, izvi hazvisizvo nekuti mutauro unonzi chiHindi nepo varapi vechiHindu vachinzi maHindu.
Kune rumwe rutivi, ChiHindi haisiriyo wega mutauro munyika sezvo dunhu rega rega riine mutauro waro. Vafambi vazhinji vanoshamisika kuona kuti kune maIndia asingataure Hindi asi ichokwadi. Muchokwadi, chiHindi hachidzidziswe mune zvimwe zvikoro uye izvi zvinonyanya kuitika muSouth India uko mitauro yeDravidian mavambo inotaurwa.
ChiHindi mutauro unonyanya kutaurwa kuNorth India asi kune vazhinji maIndia ndiwo mutauro wavo wechipiri. Chirungu, zvakadaro, chinotaurwa zvakanyanya munyika yese.
Vakadzi vese veIndia vanopfeka saris
Iyo sari ndiyo yechinyakare mapfekero evakadzi veIndia uye yetsika icon. Izwi rekuti "sari" rinobva kuSanskrit uye rinoreva "jira bhandi" nekuti chipfeko ichi chinogadzirwa nemucheka usina musono unopfuudzwa pamusoro pemusoro uye unoputira muviri wemukadzi sejira.
Iyo yakanaka, yakashongedzwa uye isina nguva sutu. Nekudaro, ivo vakadzi veIndia havangopfekedze masaris sezvo ivo vachiwanzopfeka mamwe marudzi echipfeko, zvese zviri zvepamutemo uye zvisina kujairika. Semuenzaniso, pakushandiswa kwemazuva ese kune vakadzi vanopfeka salwar kameez (yakagadzirwa nenguo yakasununguka uye bhurukwa pamwe neskafu) kunyanya kuNorth India. Vamwe vanosarudza mbatya dzekumadokero mumaguta makuru achibatanidza mafashoni ese.
MaIndia ese anoita yoga uye anoti Namaste
Yoga chiitiko chinobatanidza mweya, pfungwa nemuviri kuburikidza nemamiriro akasiyana uye kurovedza muviri. MaIndia vakaziva mabhenefiti ayo kwemazana emakore asi kuMadokero kuri munguva dzichangopfuura apo pave kuve nemukurumbira. Ichi ndicho chikonzero vazhinji vatorwa vanofunga nezveIndia uye tsika yayo senge mecca yemweya. Zvisinei, havasi vese maIndia vanosanganisira iyo yoga muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Iyi stereotype.
Kune rimwe divi, kunyangwe izwi rekuti namaste iri chikamu chakakosha mutsika yenyika, mumaguta makuru parizvino yakachengeterwa mamiriro epamutemo kana kusangana nevanhu vakura. Zvakare, zvakajairika kuinzwa kumatunhu ekuchamhembe uko kwakataurwa chiHindi kwakachena asi zvisiri zvakajairika kumaodzanyemba kweIndia uko Hindi isiriyo mutauro wekutanga.
Mhou dzinofamba mumigwagwa
Imwe yemifananidzo yekutanga inouya mupfungwa kana tichifunga nezveIndia imombe dzinoera. Ivo vanonyatsofamba mumigwagwa mumaguta eIndia? Ndizvozvo, stereotype iyi ichokwadi. Hazvizotora nguva yakareba kuti uvaone vachitora kufamba mukati meguta. Vanofamba vakadzikama mumugwagwa, saka vatyairi vanofanirwa kungwarira kudzivirira tsaona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zviratidzo nezve India
Rwizi Rukuru, zvisikwa uye mavhidhiyo